Munaasabad lagu soo dhaweynaayey dib u magacaabista wasiir Beyle oo lagu qabtay Muqdisho. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Munaasabad lagu soo dhaweynaayey dib u magacaabista wasiir Beyle oo lagu qabtay...
Munaasabad lagu soo dhaweynaayey dib u magacaabista wasiir Beyle oo lagu qabtay Muqdisho.
Munaasabad lagu soo dhaweynayay dib u magacaabidda Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana kasoo qeyb galay qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo qeybaha ururada bulshada.
Wasiirka Maaliyadda ukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa ka mid ah wasiirrada dib loogu magacaabay, kaddib markii golaha shacabku uu kalsoonida kala laabtay xukuumaddii uu hoggaaminayay Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kheyriye Maxamed Cali, Diiriye Geelle Cali iyo Xuseen Nuur oo ka mid ahaa qaban qaabiyeyaasha munaasabadda ayaa madaxda Qaranka uga mahadcelisay fursadda ay markale siiyeen wasiir Beyle ,iyagoo xusay in uu dalka shaqo wanaagsan u soo qabtay muddadii uu xilka hayay,waxayna halkaasi markale ugu hambalyeeyeen mas’uuliyadda loo igmaday.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo xilka u kala wareejiyey Wasiirrada Arrimaha Gudaha, iyo Amniga ee XF Soomaaliya.
Next articleDibad-bax ka dhan ah aflagaadadii hoggaamiyaha Faransiiska uu u geystay nabi Muxammad (NNKH) oo ka dhacay Gaalkacyo.